Kudhowaad 10 Kamid ah Barlamaanka Soomaaliya oo Lagu Dhegan Yahay – Radio Daljir
Kudhowaad 10 Kamid ah Barlamaanka Soomaaliya oo Lagu Dhegan Yahay
Luulyo 17, 2017 8:43 b 0
Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka Axmed Cali Daahir ayaa sheegay in ay muhiim tahay in la dhaqan geliyo go’aankii ka soo baxay Maxkamada Sare in lagu laabto 8 Kursi oo ka mid ah Kuraasta Xildhibaanada Golaha Shacabka.
Waxa uu sheegay in aysan macquul ahayn in aan la dhaqan gelin oo aan la dhageysan go’aanada Muhiimka ah ee ka soo baxa Maxkamada Sare ee Dalka.
Waxa uu sidoo kale sheegay in Baarlamaanka laga doonayo in ay tixgeliyaan oo ay maqlaan go’aanka Maxkamada ay gaartay dibna doorasho loogu celiyo Kuraansta ay tilmaantay Maxkamada ee Cadaalad darada iyo Musuqa ku soo baxay.
“ Waxaan taageeraya go’aanka Maxkamada Sare ka soo baxay anaga ma dooneyno in aan u kala safano Xildhibaanada Baarlamaanka balse waxaa muhiim ah in laga shaqeeyo Cadaaladda oo dib doorasho Xalaal ah loogu celiyo Kuraasta aan saxneyn ee Baarlamaanka ku jira “ayuu yiri Xeer Ilaaliyaha Qaranka”.
Waxa uu sheegay in Baarlamaanka laga doonayo hada in ay si shuruud la’aan ah ku fuliyaan go’aanka ka soo baxay Maxkamada Sare ee Dalka isla markaana ay sharciga ilaaliyaan.
Afgembigii Fashilmay iyo Erdogan Shacab Ilmadii Ka Dhammaatay (Daawo)
Faysal Rooble, Washington DC: Shirka Tallaabaqaadka Ciidamada Soomaaliya
on Saaka & Dunida iyo Maxamed Lakiman, Daljir Gaalkacyo (dhegayso)Xaaaf waaa oday somaliyed caabudwaaq Saw MA aha madaxweynihii shalay usacabo tumayseen wadanka uduceeeya waxan...
on Xulashada Daljir & Xuseen Madar, Daljir Bossaso (dhegayso)Sweden baaan kadhagaysanayaaa maxaaa idiiin diiday in ridwaaan saxardiiid cadaaalad loowYay madaxweynana looogu siiidaynaya iyadooo...
on UNDP: Fursado Shaqo & Jagooyin oo BannaanMacayga waa hassan hilowle ad am waan ahy shaqo doon tlka waa 615164583
on Wareysi Madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed: Xogwarran Sannadihii 1969-1991 (dhegayso)masha allaah
on Saaka & Dunida iyo Jamaal Faarax Aadan, Daljir Gaalkacyo (dhegayso)Hambalyo Leila Ali biiixi x gaaalkacyo hambalyooooooooo sweden hanbalyoooooo sweden lkn doorashadu waaa socotaaaa welii ...